Posted by Tranquillus | Jan 19, 2022 | Shabakada
Koorsadan, waxaad ku baran doontaa sida loo habeeyo xogtaada a khariidad is dhexgal ah, iyadoo la kaashanayoExcel iyo khariidadaha 3D!
Diyaari xogtaada, habayso khariidadaada, samee xaalado...oo u dhoofi mashruucaaga HD!
Koorsada oo dhan waxaa hagi doona kiis la taaban karo oo laga soo qaatay xogta dhabta ah, kuwaas oo ah shilalka waddooyinka New York.
Ka caawi booliiska in ay si fiican u fahmaan meelaha khatarta sare leh ee shilalka adiga oo siiya a khariidad 3D is dhexgal ah !
Waa maxay maabyada 3D?
Khariidadaha 3D, waxaad ku sawiri kartaa xogta juqraafiga iyo wakhtiga 3D globe ama khariidad gaar ah, waxaad ku arki kartaa waqti ka dib, waxaadna abuuri kartaa safarro la hagayo oo aad dadka kale la wadaagi karto. Waxaad u isticmaali kartaa 3D Maps si:
Ka fikir in ka badan milyan saf oo xog ah oo muuqaal ah khariidadaha Microsoft Bing oo qaab 3D ah oo ka soo jeeda shaxda Excel ama qaabka xogta ee Excel.
Hel aragti adiga oo ku eegaya xogtaada meel juqraafi ah oo aad aragto wakhtiga iyo taariikhda xogtu oo isbedelaysa wakhti ka dib.
Qabo sawir-qaadista oo samee shineematics, dhex-socod bandhigyo muuqaal ah oo aad wadaagi karto waqti weyn, oo soo jiitay daawadayaasha si aan waligeed loo arag. Ama u dhoofi tamashlaha hagaya fiidyaha oo u wadaag iyagana sidaas.
Ku samee khariidad firfircoon leh Excel wax ka yar 1 saac! Janaayo 19th, 2022Tranquillus
READ Erayga | Abuur resume casri ah
horeAbuur Dashboard tayo sare leh oo heer sare ah!
socdaFalanqaynta cabbirka qaybta Excel